Rita, Writing for My Sake!: ဂျူး နှင့် ၀င်းငြိမ်း အင်တာဗျူး (၆)
Posted by Rita at 5/11/2009 09:05:00 PM
ရိုးရိုးသာမာန် ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ပြောပြချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ...
ကိုယ်သိထားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို လက်ဆင့်ကမ်းချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ...
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှုကို ဖော်ပြချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ..
တစ်ခြားသူ တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို လက်ဆင်ကမ်းချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် .. တစ်ဆင့်ခံရေးသားသူ သို့တည်းမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ရေးသားသူဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ သူသိထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို ထဲထဲဝင်ဝင် နားလည်သိရှိခံစားထားမိဖို့ လိုပါတယ် ..
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ရင်း ဂျူးပြောတဲ့ " ရေးရင်း ရေးရင်း အဖြစ်အပျက်ကို ကြောက်ရွံ့လာလို့ စာအုပ်နဲ့ ဖောင်တိန်ကို ပစ်ချလိုက်ရတဲ့ ရက်တွေ ရှိပါတယ်။ " ဆိုတဲ့ စကားကိုတွေ့ရတော့ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မဝံ့ရဲမှု ဆိုတာကို သွားတွေ့ရတယ် .. ဒီလိုခံစားမှုမျိုးက သူတစ်ယောက်တည်းတင်လား မဟုတ်ပါဘူး .. ဘလော့တစ်ခုကို အသက်သွင်းဖန်တီးထားတဲ့ စာရေးသူ တော်တော်များများမှာလည်း ဒီခံစားချက်ဆိုတာ ရှိပါတယ် ... သူတို့တွေကို အားပေးမယ့်သူရှိတယ် ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့မယ့်သူရှိတယ် .. အားပေးတဲ့သူဆိုတာကတော့ စာရေးသူအတွက် အားဆေးတစ်ခွက် ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်တဲ့သူတွေကျတော့ စာရေးသူအတွက် အဖော်ကောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ် ... သူတို့တွေကြောင့်ပဲ ခံစားချက်တစ်ခုကို ပီပြင်ပုံဖော်နိုင်စွမ်းတဲ့ စာရေးဆရာကောင်းတွေ အဆင်မပြတ် ပေါ်ထွက်လာကြတယ် ... အတွေးတစ်ခုနဲ့ ငြိမ့်ညောင်းပျော်ဝင်သွားစေနိုင်တဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းပို့စ်လေးတွေအတွက် စာရေးသူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ...
If I writeacomment for this post,
I will write by English same meaning of ကိုနေဒေးသစ်.
Thanks for your reference your good comment.
My emotion due to read this post is same as you.